कठपुतली थियेटर (चेल्याबिन्स्क) र यसको मुग्ध पार्ने संगीतको
चेल्याबिन्स्क - एक लाख को रूसी शहर, छैन यूराल मात्र सबै भन्दा ठूलो सपिङ्ग सेन्टर को एक, तर रूस सारा। दुर्भाग्यवश, आज शहर एक निश्चित आर्थिक र सामाजिक कठिनाइहरू अनुभव गरिरहेको छ। यो बावजूद, सांस्कृतिक जीवन यहाँ पूर्ण स्विंग छ: गाउँमा इलाका बारेमा 300 सांस्कृतिक साइटहरु छ! तिनीहरूमध्ये - को Puppet थियेटर Volhovsky नाम। चेल्याबिन्स्क यो संस्थाले गर्व। को थिएटर बारेमा विवरण लेख बताउनुहोस्।
आज Puppet थिएटर (चेल्याबिन्स्क) - देश मा सबै भन्दा राम्रो को एक। उहाँले मात्र होइन रूस मा तर पनि विदेश, विस्तार दर्शक अद्भुत प्रदर्शन, विभिन्न प्रतियोगिताहरु र चाडहरूमा रचनात्मक WINS संग्रामहरू जीतेको, पर्यटन प्रोत्साहन दिए।
आफ्ना सबै प्रदर्शन मात्र होइन ठूलो अभिनेता प्रदर्शन, व्यावसायिक संगीत र प्रकाश साथमा जाने वस्तु, तर पनि अर्थ, र अद्वितीय शैली हो।
कला यस मन्दिरमा लगभग दैनिक प्रदर्शन हो। को 1-4 श्रृंखला बच्चाहरु को लागि डिजाइन गर्दा प्रेक्षालय, 198 सिटको लागि डिजाइन गरिएको छ। वयस्क5औं पङ्क्ति बाट सुरू हुने, ठाउँ लिन सक्छ।
नाटक थिएटर अभिनेता - चेल्याबिन्स्क अन्तिम शताब्दीको प्रारम्भिक 30-एँ मा Garyanovy पत्नी आए। स्थानीय बजार मा मास्टर, तिनीहरूले एक आकर्षक पुराना खेलौना किनेको - साग। त्यो अधिग्रहण मा बनाउन विचार गर्न वृद्धि दिनुभयो को कठपुतली थिएटर।
पावल र नीना Garyanovy enthusiastically काम मा सेट गर्नुहोस्। पहिलो प्रदर्शन स्थानीय नाटक थिएटर को चरण मा थिए। मात्र 1935 मा, अधिकारीहरु आधिकारिक चेल्याबिन्स्क राज्य Puppet थियेटर को गठन घोषणा। यसको बच्चाहरु को कलात्मक शिक्षा घर को कोठा को एक मा राखिएको: एक सानो चरण निर्माण र जवान दर्शकहरूको लागि कुर्सियों सेट अप। "Kashtanka" - यहाँ 10/02/1935 शहर पहिलो प्रदर्शन थियो। यस मिति चेल्याबिन्स्क मा गुडिया को थिएटर को जन्म दिन मानिन्छ।
वर्ष बित्यो। को puppeteers आफ्नो कला दृश्य विस्तार, पहिलो पुरस्कार सिद्ध गरेका छन्। पौराणिक कथा "बाघ Petrik" प्ले "रजत टाप", "Malchish-Kibalchish" थियो। 1970 को सुरुमा। 20 औं शताब्दीमा नवाचारै Puppet थिएटर (चेल्याबिन्स्क) ल्याए। त्यहाँ थिए पहिलो दर्शक प्रत्यक्ष puppeteers अभिनेता देखे, neshirmovye प्रदर्शन आएको। वयस्कहरूको लागि प्रदर्शन चरण ( "प्रेम र तीन सुन्ताला", "को देवताहरूको प्रेमीहरू") मा आयोजित थियो। आफ्ना छोराछोरीको थिएटर मुग्ध पार्ने संगीतको को अचानक विस्तार एक मिश्रित मूल्यांकन भएको छ, र 16+ प्रदर्शन को समयमा निलम्बित गरिएको छ।
1972 मा, Puppet थिएटर (चेल्याबिन्स्क) यो आज हो जसमा नयाँ भवन प्राप्त गरेको छ।
1977 मा, चेल्याबिन्स्क बाल थियेटर निर्देशकमा Valery Volhovsky आए। यहाँ उहाँले 10 वर्ष बिताए र "Dunno को साहसिक" "Buck," "पराल lark," "Arturo UI", "साना राजकुमार को उत्थान", "Aistenok र भयावह" सहित "हामी Cheburashka खेल्दै", स्मरणीय प्रदर्शन को एक धेरै गरे र Nikolai Gogol समेत "मृत प्राण"।
Volhovsky पछि अन्य प्रतिभाशाली निर्देशक को थिएटर आए - माइकल Khusid अलेक्जेन्डर Borok, Sergey Plotov, व्लादिमीर Gusarov, लुडविग Ustinov, प्रणय Shiryaev। तिनीहरूले जस्तै-दिमाग व्यवसायीक साथ - अभिनेता, कलाकार, संगीतकार, टेक्नीसियन - एक अभूतपूर्व नैतिक र सौंदर्य हाइट्स गर्न दृश्य खडा गरेका छन्।
के युवा र वयस्क दर्शकहरूलाई Puppet थिएटर (चेल्याबिन्स्क) प्रसन्न? पोस्टर आफ्नो धेरै सुन्दर विचार घोषणा:
"डा Dolittle विरुद्ध Barmalej"।
"विनी को Pooh लागि, सबै ..."
"पिताजी को लागि उपहार"।
"द जिन्जरब्रेड मानिस।"
"एलिस गरेको साहसिक" (प्ले ठाउँ 3D मा लिन्छ)।
"Masha र भालु।"
"जादू टोपी वा नमस्कार, हजुरआमा!"।
"साहसी गूंज फ्लाई"।
को Puppet थिएटर (चेल्याबिन्स्क) को मुग्ध पार्ने संगीतको धेरै धनी छ। वयस्कहरूको लागि - हाल4सहित 40 भन्दा बढी निर्माण, छन्। यो "विजय", "Gipsy", "अभियान", "एक केस मा मानिसले"।
टिकट को मूल्य 90 300 गर्न rubles देखि दायरा र मिति, प्रदर्शन, अवधि र प्राविधिक जटिलता को समय आधारमा आफ्नै प्रशासन द्वारा सेट गरिएको छ। टिकट उमेर बिना सबै आगंतुकों लागि उपलब्ध छन्। छुट 50 देखि नागरिक को सुअवसर विभाग उपलब्ध टिकट को लागत को 100%:
भेटेरान र महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को invalids;
कम आय परिवार;
कठपुतली थियेटर (चेल्याबिन्स्क) Kirov सडक, घर नम्बर 8 भवन नै कला मन्दिरमा प्रवेश मा पहिले देखि नै एक अद्भुत वातावरण सिर्जना जो एउटा सानो परी-कथा महल, जस्तो देखिन्छ मा स्थित छ।
ओपेरा र ब्यालेट थिएटर (Astrakhan): इतिहास, एक मुग्ध पार्ने संगीतको निर्माण, troupe
पेस्कोभ, Pushkin थिएटर: इतिहास, मुग्ध पार्ने संगीतको, troupe
ऊफा रंगमञ्च। बाश्कीर राज्य ओपेरा र ब्यालेट थिएटर: इतिहास, मुग्ध पार्ने संगीतको, troupe
कोठामा थियेटर, भोलोग्डा ठेगाना, समीक्षा, फोटो
ओम्स्क नाटक थिएटर: को थिएटर, मुग्ध पार्ने संगीतको, कलाकार, समीक्षा, ठेगाना
पढेर होंठ। ओठ-पढाइ को प्रविधी कसरी सिक्न?
र कसरी गर्दा अनन्त सुकाउने विशेषताहरु र भण्डारण सिफारिसहरू सङ्कलन गर्न
वयस्क र बच्चाहरु मा pharyngitis को उपचार
को salivary ग्रंथि को Adenoma: कारण, लक्षण र उपचार
मित्सुबिशी Delica - सभ्य सुविधाहरू एक minivan
खुट्टा लागि अभ्यास। छोराछोरीको Ploskovalgusnaya खुट्टा deformity
"Lazarevskoye समुद्र तटीय" - मनोरञ्जन केन्द्र। सोची मनोरञ्जनलाई केन्द्र
क्यान्सिस स्वानपेल (क्यान्सर स्वानपेल): आकृति सेटिंग्स, मेकअप सबटलेट र व्यक्तिगत जीवन मोडेल (फोटो)
बुल्गारिया, Plamena महल4*: तस्बिर, मूल्यहरू र समीक्षा
विमान "Katekavia": समीक्षा। "Katekavia": विमानहरु, उडानहरू